မြတ်စွာဘုရားသည် ဝေနေယျသတ္တဝါအပေါင်းကို ကြီးမားသော မဟာဂရုဏာတော်မြတ်ဖြင့် သံသရာဝဋ်ဆင်းရဲမှ ကင်းဝေးစေခြင်း အလို့ငှာ လေးသင်္ချေနှင့်ကမ္ဘာတသိန်း ပါရမီဖြည့်ကျင့်လျက် ဘုရားအဖြစ်ကို ရယူတော်မူခဲ့ပါသည်။ ဒါနပါရမီ၊ သီလပါရမီ၊ နိက္ခမပါရမီ၊ ပညာပါရမီ၊ ဝိရိယပါရမီ၊ ခန္တီပါရမီ၊ သစ္စာပါရမီ၊ အဓိဋ္ဌာနပါရမီ၊ မေတ္တာပါရမီ၊ နှင့် ဥပေက္ခာပါရမီ ဟူသော ပါရမီဆယ်ပါးကို ဘဝအဆက်ဆက် အကြိမ်ကြိမ် အလီလီ ဖြည့်ကျင့်လျက် သတ္တဝါများ၏ အကျိုးကို အနစ်နာခံ ဆောင်ရွက်တော်မူခဲ့ပါသည်။
ထို့ပြင် ဥစ္စာပစ္စည်း၊ သမီးနှင့်သား၊ ဇနီးမယား၊ အင်္ဂါကြီးငယ်နှင့် အသက်ကို စွန့်ခြင်းတည်းဟူသော စွန့်ခြင်းကြီး ငါးပါး၊ သတ္တဝါအပေါင်း၊ ဆွေမျိုးအပေါင်းနှင့် ဘုရားအဖြစ်၏ အကျိုးငှာ ဖြည့်ကျင့်တော်မူသော စရိယသုံးပါး၊ ဒေဝပုတ္တမာရ်၊ ကိလေသမာရ်၊ ခန္ဓမာရ်၊ မစ္စုမာရ်၊ အဘိသင်္ခါရမာရ် တည်းဟူသော မာရ်ငါးပါး၊ စသည်တို့ကို အောင်မြင်တော်မူခဲ့သော၊ ဘုရားဂုဏ်တော် ကိုးပါးနှင့် ပြည့်စုံတော် မူခဲ့သော၊ လူ၊နတ်၊ ဗြဟ္မာ၊ သတ္တဝါ အပေါင်းတို့၏ ဆရာတဆူ ရှေ့ဆောင်လမ်းပြ ဖြစ်တော်မူခဲ့ပါသည်။
ဤမျှ ကြီးမားလှသော ဂုဏ်နှင့် ပြီးပြည့်စုံတော်မူသော မြတ်စွာဘုရား၏ တရားစစ်တရားမှန်ကို အခြေခံမှစ၍ တဆင့်ပြီး တဆင့် လေ့လာဖတ်ရှုမှသာလျှင် နောက်ဆုံးကျင့်ကြံအားထုတ်မှုအထိ လမ်းမချော် လမ်းမလွဲစေပဲ ပြီးမြောက်စေမည်ဖြစ်ပါသည်။ သို့တည်းမဟုတ် ဖြတ်လမ်းနည်းဖြင့် ကိုယ်တွေ့သည်သာ အဓိကဟု သတ်မှတ်ကာ အလောတကြီး ကျင့်ကြံ အားထုတ်မည်ဆိုပါက အလွဲလွဲ အချော်ချော်ဖြင့် လမ်းမှားရောက်စေနိုင်ပါသည်။
ယနေ့ခေတ် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်အများစုသည် ဗုဒ္ဓဘာသာ၏အခြေခံကိုမျှ နားလည်ခြင်းမရှိတော့ပဲ ကိုးကွယ်မှုအရောရော အထွေးထွေး၊ နားလည်မှု ယောင်ဝါးဝါး၊ ယုံကြည်မှုလွဲမှားစွာနှင့် ကျင့်ကြံမှု အမှားမှား အယွင်းယွင်း ဖြစ်နေကြပါသည်။ စာပေဗဟုသုတ အားနည်းခြင်းနှင့်အတူ၊ ဆရာကောင်းတို့၏ လမ်းညွှန်မှုမရှိခြင်းတို့ကြောင့် ဟိုလူပြောလဲ ဟုတ်နိုးနိုး သည်လူပြောလဲ ကောင်းနိုးနိုးဖြစ်နေကြကာ ကိုယ်ပိုင်အသိဥာဏ်ဖြင့် ဆုံးဖြတ်နိုင်စွမ်း အားနည်းနေကြပါသည်။
မိမိတို့ကိုယ်ကို မိမိတို့ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ပါဟု သတ်မှတ်သူတိုင်းသည် မြတ်စွာဘုရားနှင့်တကွ မြတ်စွာဘုရား၏ တရားဒေသနာတော်၊ မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ သာသနာအဆုံးအမနှင့် ဝိနည်းစည်းကမ်းကို တသွေမတိမ်း လိုက်နာနေသော တပည့်သား သံဃာတော်များကိုပါ ခြွင်းချက်မရှိ သံသယကင်းစွာ ယုံကြည်ဖို့ လိုအပ်ပါသည်။
ကာလာမသုတ်နှင့် အယောင်ဆောင် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များ၏ ဆင်ခြေများ….
မြတ်စွာဘုရား ဟောကြားခဲ့သော ကာလာမသုတ္တန် ဒေသနာတော်သည် မြတ်စွာဘုရား၏ အဆုံးအမ သာသနာကို ယုံကြည်လေးစားစွာ ခြွင်းချက်မရှိ လိုက်နာနေသော စစ်မှန်သော ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များအား ဟောကြားခဲ့ခြင်း မဟုတ်ပေ။ အယူဝါဒ အမျိုးမျိုးတို့ဖြင့် ဝိဝါဒကွဲပြား ငြင်းခုံနေကြသော ကာလာမပုဏ္ဏားများအား ဟောကြားခဲ့သော တရားများဖြစ်ပါသည်။ ထိုအချိန်က ဗုဒ္ဓစာပေ အပြည့်အစုံ မပေါ်ပေါက်သေးသော ကာလဖြစ်ပြီး တခြားသော အယူဝါဒရေးရာ စာပေများ၏ ကွဲပြားမှုကို ငြင်းခုံနေကြသောကြောင့် လက်တွေ့ လိုက်နာကြည့်ပြီးမှ ယုံကြည်ကြဖို့ ဟောကြားသော တရားဖြစ်ပါသည်။
သို့ရာတွင် ယနေ့ခေတ်ကာလတွင် မြတ်ဗုဒ္ဓဟောကြားခဲ့သော ပိဋကတ်သုံးပုံ၊ ဓမ္မက္ခန္ဓာ ရှစ်သောင်းလေးထောင်အပြင် အဋ္ဌကထာ၊ ဋီကာများ အပြည့်အစုံရှိနေပါသည်။ ထိုတရားများတွင် လူ့လောကအတွင်း နေထိုင်နေကြသော လူသားတို့အား ၃၈ဖြာ မင်္ဂလာတရားအစမှသည် သေခြင်းတရားတို့ပြီးဆုံးရာ မြတ်နိဗ္ဗာန်တိုင်အောင် ဟောကြားထားသော တရားများ ပါဝင်ပါသည်။ လောကီကောင်းကျိုး အဖြာဖြာအတွက်သာမက လောကုတ္တရာကောင်းကျိုးအတွက်ပါ ဒါန၏အကျိုး၊ ဒါနမရှိခြင်း၏အပြစ်၊ သီလ၏ကောင်းခြင်း၊ သီလမရှိခြင်း၏ ဆိုးခြင်း၊ ဘာဝနာမှန်ကန်စွာဆောက်တည်ခြင်း၊ မှားယွင်းခြင်း၏အကျင့် စသည်တို့ကို ပြည့်စုံစွာ ဟောကြားတော်မူခဲ့ပါသည်။
သို့ရာတွင် ဤမျှ ပြည့်စုံအောင် ဟောကြားထားသော်လည်း မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ ကျင့်စဉ်လမ်းမှန်ကို ပြင်ဆင်ဖြည့်စွက် ပြုပြင်လိုသူများ အများအပြား ပေါ်ပေါက်လာပါသည်။ မြတ်စွာဘုရား၏ ကျင့်စဉ်နည်းလမ်း စည်းကမ်းနှင့် သွေဖည်လျက် မိမိတို့၏ ကိုယ်တွေ့ဖြင့် မြတ်စွာဘုရား၏ ဥာဏ်တော်ကို မြင်နိုင်ပါသည်ဟု ကာလာမသုတ်ကို ကိုးကားလျက် ထုတ်ဖော် ကြွေးကြော်လာကြပါသည်။ မြတ်ဘုရား၏ တရားစာပေ ပိဋကတ်များကို ပစ်ပယ်ခြင်းသည် မြတ်စွာဘုရား၏ သာသနာကို မယုံကြည်ရာ ရောက်လေသောကြောင့် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ဟုပင် သတ်မှတ်၍ မရနိုင်ပေ။
ဝိနည်းစည်းကမ်းသည် သာသနာ၏ အသက်သွေးကြော
သာသနာဟူသည် သီလ၊ သမာဓိ၊ ပညာတည်းဟူသော သိက္ခာသုံးရပ်ဖြင့် တည်ဆောက်ထားခြင်း ဖြစ်လေသောကြောင့် ရဟန်းဝိနည်း၊ လူ့သီလသည် အရေးကြီးသော အခန်းကဏ္ဍတွင် ပါဝင်ပါသည်။ သာသနာ၏ အခြေခံ အုတ်မြစ်ဖြစ်သောကြောင့် သီလမမြဲ ဝိနည်းစည်းကမ်း မထိန်းသိမ်းနိုင်ပါက သာသနာအဆောက်အဦး ပြိုလဲမှု လွယ်ကူစေနိုင်ပါသည်။ ဘုရားရှင်သည် ရဟန်းတော်များအတွက် ဝိနည်းစည်းကမ်းများကို တချိန်တည်း တခါတည်း သတ်မှတ်တော်မူခဲ့ခြင်း မဟုတ်ပဲ၊ သာသနာကို ပျက်စီးညှိုးနွမ်းစေမည်ဟု ထင်မှတ်သော အခါတိုင်းတွင် လိုအပ်သလို အခါအားလျော်စွာ သတ်မှတ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ အထူးအားဖြင့် ကိလေသာတိုးပွားစေမည်ဟု ထင်မှတ်သော ကိစ္စရပ်များကို ရှောင်ရှားစေနိုင်ရန် ရည်ရွယ်လျက် ဝိနည်းစည်းကမ်းများကို သတ်မှတ်တော်မူခဲ့ပါသည်။
ထေရဝါဒ ဗုဒ္ဓဘာသာ၏ အခြေခံတရားတော်များကို အရင်ဦးဆုံး နာယူခြင်းသည် အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါသည်။ ထို့နောက် အရိယာတို့၏ ဥာဏ်တော်ဖြင့် ဟောကြားအပ်သော သစ္စာတရားတော်များကို အနုမှ အရင့်သို့ အဆင့်ဆင့် နာယူခြင်းဖြင့် မိမိတို့၏ အသိဥာဏ်ကို ရင့်သန်စေနိုင်ပါသည်။ ထို့ပြင် အခြားသော ဆရာတော် သံဃာတော်များ ဟောကြားသော ဝိနည်း၊ သုတ္တန်၊ အဘိဓမ္မာ ဒေသနာတော်များကိုပါ နာယူကြစေလိုပါသည်။ ဆရာတော်တစ်ပါးတည်း၏ တရားတော်များကို နာယူခြင်းထက် ဆရာတော်ပေါင်းစုံ၏ တရားတော်များကို နာယူခြင်းသည် ဗဟုသုတ ပိုမို ပြည့်စုံနိုင်သည့်အပြင် အသိဥာဏ် ပညာနှင့် လိမ်မာယဉ်ကျေးမှုကိုပါ ပိုမို ရရှိစေနိုင်ပါသည်။ အထူးအားဖြင့် မိမိတို့အနေဖြင့် ဤဘဝသည် နောက်ဆုံးဘဝ ဟုတ်မဟုတ် မရေရာသေးပါသဖြင့် ကျန်ရှိသော သံသရာခရီးအတွက် ဒါနရိက္ခာ၊ သီလသိက္ခာနှင့် ဘာဝနာကျင့်စဉ်များကို တတ်အားသမျှ ကျင့်ယူ အမြတ်ထုတ်ယူဖို့ လိုအပ်နေပါသည်။
တရားဓမ္မများကို စိတ်ဝင်စားမှု အမှန်တကယ်ရှိသော လူများအတွက် အဓိက လိုအပ်ချက် ဥာဏ်အင်္ဂါငါးပါးမှာ-
၁) ဘုရား တရား သံဃာ အပေါ် ယုံကြည်ကိုးကွယ်မှုရှိခြင်း။
၂) ငါးပါးသီလကို မြဲမြံအောင် စောင့်ထိန်းခြင်း။
၃) ကံ-ကံ၏ အကျိူးကို ယုံကြည်မှုရှိခြင်း။
၄) နာမ်နှင့်ရုပ်ကို ပိုင်းခြား၍ သိမြင်ခြင်း။
၅) ငါ-ငါ့ဟာ-ငါပိုင်မဟုတ်သည်ကို ယုံကြည် (စူးစမ်း၊ စီစစ်၊ စမ်းသပ်၊ ဝေဖန်၊ ပွားများ) ဥာဏ်ဖြင့်သိမြင်ခြင်း။ တို့ဖြစ်သည်။
ပစ္စည်းစွန့်ရမှာလား၊ စွဲလန်းမှု တဏှာ စွန့်ရမှာလား….
ပစ္စည်းစွန့်လှူဒါန်းခြင်းသည် ကုသိုလ်ကောင်းမှု ပြုလုပ်သည် မှန်ပါသော်လည်း ၊ ထိုပစ္စည်းအပေါ် စွဲလမ်းတပ်မက်မှု ငြိတွယ်မှု တဏှာ ဖြစ်နေသေးပါက ယင်းသည် အကုသိုလ် ဖြစ်သွားနိုင်ပါသည်။ ဘုရားတည်၊ ကျောင်းဆောက်၊ ဓမ္မာရုံလှူဒါန်းနေသူများပင် ဖြစ်စေကာမူ၊ ငါတည်ခဲ့သော ဘုရား၊ ကျောင်း၊ ဓမ္မာရုံများဟု စွဲလမ်းလျက် သေပွဲဝင်ခဲ့ပါလျှင် အပါယ်ဇာတိ လားရမည်သာ ဖြစ်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် တကယ်မရှိသော ပညတ်ပေါ်မူတည်လျက် စိတ်၊စေတသိတ်တွင် ပေါ်ပေါက်သော ပရမတ်သဘောတရားများ၏ မမြဲမှုကို ပိုင်းခြားသိပြီး ပယ်သတ်နိုင်မှသာလျှင် ဘဝဇာတိ ထပ်မံ မရရှိမည် ဖြစ်ပါသည်။
ကုသိုလ်တရားဟူသည် မိမိဖက်မှ စွန့်လွှတ်ခြင်း၊ အနစ်နာခံခြင်း၊ ပြုလုပ်ခြင်းမှသာ ရရှိနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။ တရားစခန်းဝင်တိုင်း ကုသိုလ်ရရှိမည် မဟုတ်ပေ။ တရားစခန်းဝင်သည်ပြော၍ သီလမလုံခြုံ၊ အချိန်ကုန်ခံ၊ ဇွဲနှင့်ကြိတ်မှိတ် အညောင်းခံထိုင်လျက်၊ အချိန်စေ့သည်နှင့် ဒုက္ခခံခြင်း စိတ်မှ လွတ်မြောက်ပြီဟု သဘောထားကာ၊ သူတပါးမှ လှူဒါန်းသော အစားအသောက်များကို သုံးဆောင်နေခြင်းသည် အဘယ်ကုသိုလ်မျှ ရရှိနိုင်မည် မဟုတ်ပေ။ ကုသိုလ်တရားဟူသည် ကြည်လင်သော စိတ်၊ လုံခြုံသော သီလ၊ မျှတသော ဘာဝနာပွားမှု၊ ယုံကြည်သော သဒ္ဓါတရားတို့မှသာလျှင် ရရှိနိုင်ပါသည်။
အပါယ်ပိတ်တရားများ နားမှ နာနေသော်လည်း၊ လက်တွေ့တွင်မူ ဘုရားတရားများကို ပြင်ဆင်ဖြည့်စွက်၊ တရားအမှားများ ပြသနေခြင်း၊ သီလသိက္ခာ၊ဝိနည်းတော်များကို လေးစားမှုမရှိခြင်း၊ မိမိနှင့်မတန်သေးသော စကားများ ပြောဆိုခြင်း၊ သီလ သမာဓိ ပညာနှင့်ပြည့်စုံတော်မူသော ဆရာတော်ကြီးများ၏ အကာအကွယ်ယူပြီး မိမိလိုရာ ဆွဲယူပြောဆိုခြင်း၊ မိမိ၏ အသိဥာဏ်ဖြင့် မှား၏ မှန်၏ မဆုံးဖြတ်နိုင်သေးပဲ တရားများကို ဖြန့်ဝေနေခြင်း စသော အပါယ်တံခါးဖွင့်စေသော အပြုအမူများကို အမြန်ဆုံးအဆုံးသတ်စေခြင်းဖြင့် မိမိတို့ကိုယ်ကို မိမိတို့ ကယ်တင်သင့်ပါကြောင်း အကြံပြု ရေးသားလိုက်ရပါသည်။ ။
Posted by ထက်စုနှင်းဆီ at 9:53 AM9comments
Posted by ထက်စုနှင်းဆီ at 5:01 PM 1 comments
သီလ၊ သတိ၊ ဥာဏ်ယှဉ်တွဲပါ..
မြတ်စွာဘုရား၏ သာသနာတော်အား ၂၅၅၃ ခုနှစ်သို့တိုင် ပရိယတ္တိ၊ ပဋိပတ္တိ၊ ပဋိဝေဓ သာသနာသုံးရပ်ဖြင့် အစဉ်အဆက် ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်လာကြသူများမှာ ရဟန်းသံဃာတော်များ ဖြစ်ကြပါသည်။ ယနေ့ကာလသည် ဝိမုတ္တိကာလ ဖြစ်လေသောကြောင့် လူအများသည် ဝိပဿနာတရားကို ပိုမိုစိတ်ဝင်စားလာကြပါသည်။
ဝိပဿနာတရားစစ် တရားမှန်၏ အင်္ဂါရပ်..
တရားစစ် တရားမှန်၏ အင်္ဂါရပ်မှာ နှစ်ချက်တည်းသာ ရှိပါသည်။ ရှုပွားဆဲအချိန်တွင် ကိလေသာများ ငြိ်မ်းနေသောကြောင့် စိတ်ရော ကိုယ်ပါ ငြိမ်းချမ်းနေပြီး၊ တရားရသွားသောအခါတွင်လည်း ပယ်သတ်သင့်သော ကိလေသာများကို ပယ်သတ်ပြီးသောကြောင့် ကိုယ် စိတ် နှလုံး သုံးပါးစလုံး ငြိမ်းချမ်းနေတတ်ပါသည်။ ထိုသို့မဟုတ်ပဲ ကိုယ်ရော စိတ်ပါ ပင်ပန်းနေမည်ဆိုပါက တရားမှားနေကြောင်း သိထားသင့်ပါသည်။
တရားဟူသည် ထိုင်မှ ရမည်လော…
တရားဟူသည် ထိုင်မှသာ ရမည်ဟု လူအများက ထင်မှတ်မှားနေကြပါသည်။ တရားထိုင်ကျင့်ရှိသူများကို အပြစ်မပြောလိုသော်လည်း တရားထိုင်ရန် အဆင်မပြေသူများအတွက်မူ စိတ်အားငယ်စရာ ဖြစ်လို့ နေပါသည်။ အမှန်စင်စစ် ဝိပဿနာတရားဟူသည် ကာယအလုပ်မဟုတ်၊ ဥာဏအလုပ်သာလျှင်ဖြစ်ပါသည်။ မည်သို့သော အမူအရာလှုပ်ရှားမှုမျိုးမဆို သတိတရားနှင့် အသိကပ်ပြီး ဥာဏ်နှင့်ရှုပွားနိုင်မည်ဆိုပါက ယင်းသည် တရားထိုင်သည်နှင့် သဘောတရားအတူတူပင် ဖြစ်ပါသည်။ ဥာဏ်ပညာမပါပဲ တရားထိုင်မည် ဆိုပါက မည်မျှပင် ကြာကြာထိုင်စေကာမူ တရားစစ်ကို သိရှိနိုင်မည် မဟုတ်ပေ။
ပဠာသ - မတူဘဲ တုပြိုင်ပြောဆိုခြင်း
မိမိတို့ထက် အကျင့်သီလ၊ စာပေဗဟုသုတ၊ သမာဓိ၊ ပညာတို့နှင့် ပြည့်စုံ သာလွန် မြင့်မြတ်တော်မူကြသော ဆရာတော်ကြီးများနှင့် မရိုမသေ ဖက်ပြိုင် ပြောဆို ပြုလုပ်ခြင်းကို ပဠာသ ဟု ခေါ်ပါသည်။ ဤကဲ့သို့ မနှိုင်းကောင်းဘဲ နှိုင်းယှဉ် ဂုဏ်ပြိုင်ခြင်း၊ မရိုမသေ တန်းတူထားပြောဆိုခြင်းသည် အပြစ် အလွန်ကြီးပါသည်။ ဤသို့သော လူများ၏ နှုတ်သွက် လျှာသွက် အာကောင်းကောင်းနှင့် ရဲရဲတင်းတင်း ပြောဆိုနေခြင်းကို စူးစမ်းဆင်ခြင်ဥာဏ်နှင့် အသိလိမ္မာ ဥာဏ်ပညာ နည်းပါးသော အချို့လူများက ဟုတ်လေနိုးနိုး ယုံလွယ်တတ်ကြပါသည်။ ထိုပြင် ကိုယ်တွေ့ဥာဏ်ပါဟု ပြောပါက သာ၍ အထင်ကြီးတတ်ပြီး ရှေ့က သွားသူများနောက် လိုက်ပါရန် ဝန်မလေးတတ်ကြပေ။
အရိယာသူတော်ကောင်း ဟူသည် သီလစင်ကြယ်မှု ရာခိုင်နှုန်းပြည့်ရှိရပါမည်…
ပုထုဇဉ်၏ သီလဝိသုဒ္ဓိသည် အချိန်မရွေး ဖောက်ဖျက်နိုင်သော်လည်း အရိယာသူတော်ကောင်း၏ သီလဝိသုဒ္ဓိသည် မည်သည့်အကြောင်းပြချက်နှင့်မျှ မပျက်စီးနိုင်တော့ပေ။ ကိုယ်၊ စိတ်၊ နှလုံးသုံးပါး စင်ကြယ်ယုံသာမက ရတနာသုံးပါးနှင့်တကွ ကြီးမြတ်သူများအားလုံးကို ပြစ်မှား အပြစ်တင်ခြင်း မပြုလုပ်တော့ပေ။ ရဟန်းဖြစ်မည် ဆိုပါက မြတ်စွာဘုရား၏ အဆုံးအမ သာသနာကို ရိုရိုသေသေ လိုက်နာသည့်အပြင် ဝိနည်းစည်းကမ်းကို အသက်ထက် တန်ဖိုးထား ရိုသေတတ်ကြပါသည်။
သမ္မုတိသစ္စာ၊ ပရမတ္တသစ္စာ၊ အရိယသစ္စာဟူ၍ နယ်ပယ်သုံးရပ်ရှိပါသည်။ သမ္မုတိသစ္စာနယ်ပယ်တွင် အမှန်မရှိသော နံမည် ပညတ်အခေါ်အဝေါ်များသာ ရှိသော်လည်း၊ ပရမတ္တသစ္စာ နယ်ပယ်တွင်မူ အဟုတ်ရှိ အမှန်တကယ်ရှိသော စိတ် စေတသိက် ရုပ်၊ နိဗ္ဗာန် လေးမျိုးသာလျှင် ရှိနေပါသည်။ အရိယသစ္စာနယ်ပယ်ဆိုသည်မှာ- ဒုက္ခသစ္စာ၊ သမုဒယသစ္စာ၊ နိရောဓသစ္စာ၊ မဂ္ဂသစ္စာ ဟူသော သစ္စာလေးပါးကို ခေါ်ဆိုခြင်းဖြစ်ပါသည်။
ပညတ်ဟူသည် သမုတ်ရှိဖြစ်၍ ပရမတ်ဟူသည် အဟုတ်ရှိဖြစ်လေ၏။ သို့ရာတွင် ပညတ်တည်းဟူသော သမ္မုတိသစ္စာနယ်ကို ပစ်ပယ်၍မရနိုင်ပေ။ လောက အခေါ်ရှိနှင့် တကယ်ရှိကို ပိုင်းခြားသိမြင်ခြင်းဖြင့် ပရမတ်တည်းဟူသော ပရမတ္တသစ္စာ၏ မမြဲသောသဘော ဖောက်ပြန်ပြောင်းလဲနေသော သဘောတရားများကို ဥာဏ်နှင့် သိမြင်လာနိုင်ပါသည်။ ထိုသို့မဟုတ်ပဲ ပညတ်ကို ပယ်မည်ဆိုပါက မှားယွင်းသော အတွေးအခေါ် အယူအဆများ လုပ်ဆောင်မှုများကြောင့် အပါယ်ငရဲသို့ လားရတတ်ပါသည်။
ထိုကြောင့် တချို့သော တရားပြနေသူများသည် ပညတ်ကို တကယ်မရှိ၊ အမှန်ရှိတာ ပရမတ်ဟု ဆိုကာ ဘုန်းကြီးနှင့်လူ ဟူ၍ ခွဲခြားခြင်းမပြုတော့ပဲ ကြမ်းတပြေးတည်း အတူထိုင်ခြင်း၊ ဘုန်းကြီးနှင့် သီလရှင် တဝိုင်းတည်း ဆွမ်းဘုန်းပေးခြင်း၊ ဝိကာလဘောဇနာဟူသည် အချိန်သတ်မှတ်ချက်သာဖြစ်၍ တကယ်မရှိသော ပညတ်ချက်ဟုဆိုကာ မွန်းလွဲချိန်ကျော်သည်အထိ ဆွမ်းဘုန်းပေးခြင်း စသော ရဟန်းဝိနည်း၊ လူ့စည်းကမ်းများကို ချိုးဖောက်လာကြပါသည်။ အကန့်အသတ်ရှိသော အတ္တစွမ်းအားကို အခြေခံလျက် အနတ္တစွမ်းအား အနတ္တဥာဏ်ဆိုက်ရောက်အောင် ပြုလုပ်ရမည့်အစား အတ္တကို ပစ်ပယ်နေခြင်းကြောင့် အနတ္တမြင်မမြင်မှာ မသေချာလှပေ။
စွဲလမ်းမှုတဏှာ၊ ငါစွဲ ဒိဋ္ဌိနှင့် ထောင်လွှားသော မာနများကို ပယ်သတ်ရမည့်အစား ပညတ်ကို တကယ်မရှိဟုယူဆကာ ပယ်သတ်နေခြင်းသည် မှားယွင်းသော အယူအဆ အတွေးအခေါ်များသာ ဖြစ်ပါသည်။ အမှန်တကယ် ပယ်သတ်ရမည့် ငါတော် ငါတတ် ငါသိ ဟူသော တဏှာ၊မာန၊ ဒိဋ္ဌိများနှင့်အတူ မိမိတို့ကိုယ်ကို မိမိတို့ အရိယာပါဟု လည်းကောင်း၊ ဥာဏ်စဉ်များ ဘယ်နှစ်ဆင့် တက်နေပါပြီဟုလည်းကောင်း ၊ ရဟန်း၏ ဝိနည်းသိက္ခာပုဒ်၊ လူ့စည်းကမ်းများ ချိုးဖောက်လျက် တိုင်းသိပြည်သိ ကမ္ဘာသိအောင် ကြော်ညာ မောင်းခတ်လျက် ရှိနေကြပါသည်။
ဒုက္ခသစ္စာဟူသည် ပိုင်းခြားသိရမည်၊ သမုဒယသစ္စာဟူသည် ပယ်သတ်ရမည်၊ နိရောဓသစ္စာဟူသည် မျက်မှောက်ပြုရမည်၊မဂ္ဂသစ္စာဟူသည် ပွားများရမည် ဖြစ်ပေသည်။ မဂ္ဂသစ္စာဖြင့် ဒုက္ခသစ္စာကို ပိုင်းခြားပြီး သိမည်ဆိုပါက သမုဒယသစ္စာကို ပယ်သတ်ခြင်းနှင့် နိရောဓသစ္စာကို မျက်မှောက်ပြုခြင်းသည် တပြိုက်တည်း ပြီးမြောက်နိုင်ပါသည်။
သတိပဋ္ဌာန်နည်းဖြင့် ဝိပဿနာရှုပွားနည်း လေးမျိုး…
ကာယာနုပဿနာ၊ ဝေဒနာနုပဿနာ၊ စိတ္တာနုပဿနာ၊ ဓမ္မာနုပဿနာ ဟူ၍ လေးမျိုးရှိပါသည်။ လူတို့၏ ပင်ကိုယ် စရိုက်ပေါ်မူတည်လျက် ရှုနည်းအမျိုးမျိုး ကွဲပြားနိုင်သော်လည်း မည်သည့်ရှုနည်းကို ကျင့်သုံးစေကာမူ ကျန်သုံးနည်းသည်လဲ အလိုအလျောက် အသုံးပြုနေရပါသည်။
မည်သည့် သက်ရှိသတ္တဝါမဆို မျက်စိဖြင့် မြင်နိုင်သော ဝင်ကစွတ် အထည်ခန္ဓာနှင့် ပကတိဥာဏ်ဖြင့်သာ သိနိုင်သော သဘောခန္ဓာငါးပါး ဟူ၍ နှစ်မျိုး ရှိပေသည်။ အထည်ခန္ဓာအား ပညတ်ဟုဆိုကာ ပယ်လိုက်ပါက အထည်ခန္ဓာအား အမှီပြုကာ ပေါ်ပေါက်လာမည့် သဘောခန္ဓာငါးပါး၏ မတည်မြဲမှုသဘော၊ ဖောက်ပြန်ပြောင်းလဲမှုသဘောကို သိရှိနိုင်မည် မဟုတ်တော့ပေ။ ထိုကြောင့် ဝိပဿနာရှုပွားခြင်းဆိုသည်မှာ အမှန်တကယ် မရှိသော ပညတ်အထည်ခန္ဓာကို အသုံးပြုကာ သိတတ်သော သဘောတရား ပရမတ်ခန္ဓာ ငါးပါး၏ မတည်မြဲမှုသဘောကို ဥာဏ်ဖြင့်ပိုင်းခြားသိမြင်နိုင်ခြင်းကို ဆိုလိုပါသည်။
အာရုံသိ ခန္ဓာငါးပါးသည်သာ ဘဝတစ်ခုလုံး၏ ဖွားသေ
သက်ရှိသတ္တဝါများ၏ သိတတ်သော သဘောတရားလေးသည်သာ ဘဝ၏ ဖွားသေ ဖြစ်ပေသည်။ သိတတ်သော သဘောတရား မရှိတော့ခြင်းကို သေဆုံးခြင်းဟု ခေါ်ဆိုပါသည်။ အာရုံနှင့် ဒွါရတိုက်ချိန်တွင် ဖြစ်ပေါ်လာသော သိတတ်မှု သဘောလေး၏ မမြဲခြင်းတရားကို ဒုက္ခသစ္စာဟု မြတ်စွာဘုရားက သတ်မှတ်ခဲ့ပါသည်။
မြတ်စွာဘုရား၏ အလုပ်ပေးတရားတော် (အနတ္တလက္ခဏာသုတ်)
“နေတံမမ နေသော ဟမသ္မိ နမေတော အတ္တာ”
ငါ၊ င့ါဥစ္စာ၊ ငါ့အတ္တ သည် အမှန်မရှိ၊ အနတ္တပါသည်သကား။ ဟူသည့် မြတ်စွာဘုရား၏ အလုပ်ပေးတရားတော်သည် အာရုံသိ သဘောတရားလေး၏ မမြဲခြင်း ဆင်းရဲအမှန်ကို ဆင်ခြင်နှလုံးသွင်း ပိုင်းခြားခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
ဆူနာမီဆရာတော် ဦးဥတ္တမသာရ၏ တရားကောက်နှုတ်ချက်…
အတ္တ(တစ်ခုခု၊တစ်ယောက်ယောက်၊တစ်ချိန်ချိန်၊တစ်နေရာရာရဲ့အား) မပါစေနဲ့။ တစ်ခု၊ တစ်ယောက်၊ တစ်ချိန်၊ တစ်နေရာဆိုတဲ့ အထင်မှားကင်းကင်း၊ အစွဲကင်းကင်း လုပ်ရုံသက်သက်လုပ်မှ ကိလေသာဖြစ်နေမှုက လွတ်လပ်ရေးရမယ်။ မကန့်သတ်ဖို့၊ မပညတ်ဖို့၊ မဆုပ်ကိုင်ဖို့၊ မသိမ်းပိုက်ဖို့ အဓိကထားမှ တရားအလုပ်စစ်။>><> <<မေ့လျော့မှု ( အ၀ိဇ္ဇာ ) ကြောင့်>>
အထက်ပါ ဆူနာမီဆရာတော်၏ တရားယူဆချက်သည် မြတ်စွာဘုရား၏ မြတ်တရားနှင့် ဆန့်ကျင်နေပါသည်။ စိတ်ဖြင့်သိသော အရာမှန်သမျှ ခန္ဓာငါးပါးအတု ဟု၊ သတ်မှတ်လျက် ဖောက်ပြန်ပျက်စီးမှုသည်သာ ဒုက္ခသစ္စာ အစစ်ဟု ဆိုလိုထားပါသည်။
ဝေဒနာဟူသည် နာကျင် ကိုက်ခဲ ညောင်းညာခြင်းများကို သာ ဆိုလိုခြင်းမဟုတ်ပါ။ ချမ်းသာခြင်း သုခဝေဒနာ၊ ဆင်းရဲခြင်း ဒုက္ခဝေဒနာနှင့် ချမ်းသာ ဆင်းရဲမဟုတ်သော ဥပေက္ခာဝေဒနာ ဟူ၍ ဝေဒနာသုံးမျိုးရှိပါသည်။ ဖောက်ပြန်မှု၊ ခံစားမှု၊ မှတ်သားမှု၊ စေ့ဆော်မှု၊ ပြုလုပ်မှုသဘောတည်းဟူသော သဘောခန္ဓာရှိနေသ၍ ဝေဒနာသည် ရှိနေမည်ဖြစ်ပါသည်။ ဝေဒနာချုပ်ငြိမ်းချိန်သည် သေဆုံးသွားသောအချိန်သာ ဖြစ်နိုင်ပေသည်။
အထည်ပညတ်ခန္ဓာ၏ ဖောက်ပြန်ပျက်စီးမှုသည် ထိန်းချုပ်၍မရသလို၊ တားဆီးနိုင်ခြင်းလည်းမရှိနိုင်ပါ။ သူ့သဘော သူဆောင်လျက် သူ့သဘာဝအတိုင်း ဖောက်ပြန်ပျက်စီးနေပါသည်။ သို့ရာတွင် သက်ရှိသတ္တဝါများ၏ မွေးရာပါ အသိဥာဏ်ဖြင့် ကံ၊ စ်ိတ်၊ ဥတု၊ အာဟာရများဖြင့် မတင့်တယ်မှု အသုဘ မှ တင့်တယ်မှု သုဘသို့ အချိန်နှင့်အမျှ ပြုပြင်နေကြရပါသည်။ ထိုကြောင့် ထိုဖောက်ပြန်ပြောင်းလဲမှုကို သိရုံသက်သက်မျှဖြင့် ဒုက္ခသစ္စာ၏ သဘောကို ပြည့်စုံအောင် သိနိုင်မည် မဟုတ်ပေ။ တွယ်တာစရာမရှိ၊ ကပ်ငြိစရာမရှိ၊ ငြီးငွေ့စရာ ဒုက္ခခံစားမှု သက်သက်သာ ဖြစ်သည်ဟူသော သံဝေဂတရားကို အခြေခံသော အသိတရားကိုသာ နားလည်နုိုင်ပါသည်။ ဖောက်ပြန်မှုကို ငြီးငွေ့ပြီး စွဲလမ်းမှု တဏှာ၊ ငါစွဲ ဒိဋ္ဌိ နှင့် ထောင်လွှားသော မာနကို အပြီးတိုင် ပယ်သတ်နိုင်မှသာလျှင် အသင်္ခတတည်းဟူသော နိဗ္ဗာန်ကို မျက်မှောက်ပြုနိုင်မည် ဖြစ်ပေသည်။
မြတ်စွာဘုရား၏ လမ်းညွှန်ပြသမှု ကို အခြေခံလျက် ကျင့်ကြံအားထုတ်တော်မူသော ဆရာသမားများ၏ ကိုယ်တွေ့သည်သာ မှန်ကန်သော နည်းလမ်းကျင့်စဉ် ဖြစ်နိုင်ပါသည်။ သိပြီးမှ ကျင့်ကြံအားထုတ်မှုသည် မသိပဲ ကျင့်ကြံအားထုတ်မှုထက် ပိုမိုထိရောက် မှန်ကန် မြန်ဆန်နိုင်ပါသည်။ ထိုကြောင့် စစ်မှန်သော ဆရာသမား၏ လမ်းညွှန်မှု တာဝန် (ညာတပရိညာ) ပြီးဆုံးပါလျှင် မိမိ၏ ကျင့်ကြံအားထုတ်မှု တာဝန် (တိရဏပရိညာ) ကို ဆောင်ရွက်နိုင်ပါလျှင် ဓမ္မ၏တာဝန် (ပဟာနပရိညာ) သည် အချိန်တန်လျှင် ပြသမည်ဖြစ်ပါကြောင်း စေတနာရှေ့ထားလျက် ရေးသားလိုက်ရပါသည်။ ။
(ထိန်းချုပ်ခြင်း၊ တားဆီးခြင်း ပြုလုပ်၍ မရသော သူ့သဘော သူဆောင်၊ သူ့အလုပ် သူလုပ်နေသော ရုပ်၊ နာမ်၊ ဓမ္မ၊ သင်္ခင်္ါရတို့၏ မမြဲမှု၊ အချိန်နှင့်အမျှ ဖောက်ပြန် ပြောင်းလဲ ပျက်စီးနေမှုများကို မြဲမြံသော သတိတရားနှင့် အသိကပ်ပြီး ဥာဏ်ဖြင့် စောင့်ကြည့် ရှုပွားခြင်းဖြင့် တဏှာ၊ မာန၊ ဒိဋ္ဌိတည်း ဟူသော ကိလေသာများကို အပြီးတိုင် ပယ်သတ်နိုင်ခြင်းသည် အသင်္ခတ၏ နောက်ဆုံးပန်းတိုင် ဖြစ်ပါသည်။)
(သင်ဆရာ၊ မြင်ဆရာ၊ ကြားဆရာနှင့် ဖတ်ဆရာများ၏ သွန်သင်ဆုံးမမှု မြတ်တရားများပေါ် အခြေခံ၍ ရေးသားထားခြင်း ဖြစ်သော်လည်း၊ မှားယွင်းမှု ရှိပါက စာရေးသူ၏ တာဝန်သာ ဖြစ်ပါသည်။)
Posted by ထက်စုနှင်းဆီ at 8:14 PM 40 comments
မြတ်စွာဘုရား ဟောကြားတော်မူသော ဝေလာမပုဏ္ဏားကြီးအလှူနှင့် စပ်လျဉ်း၍ အလှူတစ်ခုထက် တစ်ခု ကြီးကျယ်မြင့်မြတ်ပုံကို အောက်ပါအတိုင်း နှိုင်းယှဉ်ခဲ့ပါသည်။
-ဆင်၊ မြင်း၊ ကျွဲ၊ နွား၊ စားဖွယ်ပစ္စည်း ၈၄၀၀၀ စီ လှူသော အလှူထက်
-သောတာပန်တစ်ဦးကို လှူပါက ကြီးမြတ်ကြောင်း။
-သောတာပန် ၁၀၀ ကို လှူသည်ထက်
-သကဒါဂါမ်တစ်ဦးကို လှူပါက ပိုမြတ်ကြောင်း။
-သကဒါဂါမ် ၁၀၀ ကို လှူသည်ထက်
-အနာဂါမ်တစ်ဦးကို လှူပါက ပိုမြတ်ကြောင်း။
-အနာဂါမ် ၁၀၀ ကို လှူသည်ထက်
-ရဟန္တာတစ်ပါးကို လှူသူက ပိုမြတ်ကြောင်း။
-ရဟန္တာ ၁၀၀ ကို လှူသည်ထက်
-ပစ္စေကဗုဒ္ဓါတစ်ပါးကို လှူသူက ပိုမြတ်ကြောင်း။
-ပစ္စေကဗုဒ္ဓါ ၁၀၀ကို လှူသည်ထက်
-သမ္မာသံဗုဒ္ဓ ဘုရားရှင်ကို လှူသူက ပိုမြတ်ကြောင်း။
-ဘုရားအမှူးထားသည့် သံဃာကို လှူသူက ပိုမြတ်ကြောင်း။
-ဘုရားအမှူးပြုပြီး သံဃာကို လှူသူထက်
-ကျောင်းတစ်ဆောင်ကို လှူသူက ပိုမြတ်ကြောင်း။
-ဘုရား၊ တရား၊ သံဃာ (သရဏဂုံ ၃-ပါး) ကို ကိုးကွယ်ဆည်းကပ်သူက သာလွန်မြင့်မြတ်ကြောင်း။
-ဘုရား၊ တရား၊ သံဃာကို ကိုးကွယ်ဆည်းကပ်သူထက်
-ငါးပါးသီလကို စောင့်ထိန်းသူက ပိုမြတ်ကြောင်း။
-ပန်းတစ်ရှုပ် နမ်းခိုက်မျှ မေတ္တာစိတ်ကို ပွားများပါက ပိုမြတ်ကြောင်း။
-လက်ဖျစ်တတွတ်မျှ အနိစ္စသညာကို ပွားများသူက အမြတ်ဆုံး ဖြစ်ပါသည်။
(ဓမ္မမိတ်ဆွေ ရေးသားသော လူ့ပြည်မှအပြန် စာအုပ်မှ ကောက်နှုတ်ချက်)
Posted by ထက်စုနှင်းဆီ at 7:05 PM0comments
အမုန်းတရားနဲ့ စစ်ကို ရှောင်ကာ..
Posted by ထက်စုနှင်းဆီ at 11:17 PM 1 comments
သာသနာပြုခြင်းဆိုသည်မှာ အလွန်မြင့်မြတ်သော လုပ်ရပ်ဖြစ်ပါသည်။ သာသနာပြုခြင်းကို လူတိုင်းအလွယ်တကူ မပြုလုပ်နိုင်ပေ။ သို့ရာတွင် ယခုခေတ်တွင် သာသနာပြုခြင်းဟူသော ခေါင်းစဉ်အောက်တွင် သာသနာဖျက်ခြင်းကိုပါ ပူးတွဲလုပ်ဆောင်နေကြပါသည်။ သာသနာပြုခြင်းဟူသော လုပ်ရပ်ကို မဆိုထားနှင့်၊ စကားရပ်ကိုပင် သေသေချာချာ သဘောပေါက် နားလည်မှုမရှိကြဘဲ၊ သာသနာပြု ဆိုင်းဘုတ်ကို အလွယ်တကူ ထူထောင်နေကြပါသည်။
၁) ဘုရား၊ တရား၊ သံဃာတည်းဟူသော ရတနာသုံးပါးအပေါ် ယုံကြည်မှုသဒ္ဓါတရား အကြွင်းမဲ့ထားရှိရပါမည်။
၂) မြတ်စွာဘုရား၏ အဆုံးအမ သာသနာကို တသွေမတိမ်း လိုက်နာရပါမည်။
၃) ရိုးသားမှု၊ ကိုယ်ကျင့်သီလ၊ ကံသုံးပါးစလုံးတွင် အထူးလုံခြုံရပါမည်။
၄) သူတပါးမှ သာသနာ့ကောင်းကျိုးအတွက် ညွန်ပြပြောဆိုသမျှကို လိုက်နာသူ၊ ဆိုဆုံးမလွယ်သူဖြစ်ရန် လိုအပ်ပါသည်။
၅) လူတိုင်းအပေါ် မေတ္တာတရားဖြင့် ကောင်းကျိုးလိုလားသူ ဖြစ်ရန် အရေးကြီးလှပါသည်။
၆) ကိုယ်ကျိုးစီးပွားမဖက်၊ အများအကျိုးအတွက်သက်သက်သာလျှင် ဆောင်ရွက်ရပါမည်။
၇) စစ်မှန်သော စိတ်ရင်းစေတနာဖြင့်သာ သာသနာ့ကောင်းကျိုးကို သယ်ပိုးရပါမည်။
၂) ဘုရားသားတော် တပည့်သံဃာတော်များအား သင်ကြားစေခြင်း။
၃) မပျောက်မပျက် လက်ဆင့်ကမ်းသယ်ဆောင်ခြင်း။
၄) မျိုးဆက်သစ်ကလေးသူငယ်များအား သင်ကြားပို့ချခြင်း။
၅) လူအများအား လောကီငရဲ သံသရာဝဋ်ဆင်းရဲမှ ကင်းလွတ်စေခြင်း။
၆) လောကီကောင်းကျိုးသာမက လောကုတ္တရာကောင်းကျိုးများကို တတ်နိုင်သမျှ ပြုလုပ်ခြင်း။
၇) သာသနာတည်မြဲစေရန် ထိန်းသိမ်းခြင်းအပြင် ပြန့်ပွားစည်ပင်စေရန် အားထုတ်ခြင်း စသည်တို့ ပါဝင်ပါသည်။
သာသနာအကျိုးသယ်ပိုးရာတွင် ဆရာ၊ဒကာ ညီညွတ်မှုသည် အထူးအရေးပါလှပါသည်။
ဆရာတည်းဟူသော ရဟန်းတော်များအနေနှင့် မြတ်စွာဘုရား၏ အဆုံးအမများကို တသွေမတိမ်း လိုက်နာခြင်းဖြင့် မိမိတို့၏ ဒကာ၊ ဒကာမများ ကိုးကွယ်ရာ စံပြအဖြစ် ပြောဆိုပြုမူ နေထိုင်သင့်ပါသည်။ သို့တည်းမဟုတ် မိမိတို့၏ အပြောအဆို အနေအထိုင်ကြောင့် ဒကာ ဒကာမများကို အပယ်လမ်းသို့ ပို့ဆောင်ပေးသကဲ့သို့ ဖြစ်တတ်ပါသည်။
ဒကာ ဒကာမများအနေနှင့်လည်း မိမိတို့၏ အပြောအဆို အနေအထိုင်ကြောင့် ရဟန်းတော်များ၏ ဝိနည်း သိက္ခာ အကျင့်သီလကို ထိခိုက်စေပါလျှင် လက်ရှိဘဝအတွက်သာမက သံသရာတလျှောက်လုံးတွင်ပါ အပြစ်များစွာ ရရှိနိုင်ပါသည်။
မြတ်စွာဘုရားလက်ထက် သာသနာရှေ့ပိုင်းတွင် ဝိနည်းစည်းကမ်းများစွာ မရှိသေးသော်လည်း ရဟန်းတော်များသည် ကိလေသာတိုးပွားစေမည့် အရေးမှန်သမျှ မပြုလုပ်ကြပေ။ အမှန်စင်စစ် စည်းကမ်းဟူသည် စည်းကမ်းရှိသူများအတွက် မလိုအပ်သော်လည်း စည်းကမ်းမရှိသူများအတွက် အရေးတကြီး လိုအပ်လှပါသည်။ ထို့ကြောင့် သာသနာနောက်ပိုင်းတွင် စည်းကမ်းမရှိသော ရဟန်းများသည် ကိလေသာတိုးပွားစေမည့် ကိစ္စရပ်များကို တစတစ ပိုမိုလုပ်ကိုင်လာခြင်းကြောင့် ဝိနည်းစည်းကမ်းများကို တိုးမြှင့်ချမှတ်လာကြပါသည်။
မြတ်စွာဘုရား၏ အဆုံးအမသာသနာကို လက်တလုံးကြား ပြင်ဆင်ဖြည့်စွက်ချင်ကြသော တချို့သော ရဟန်းများသည် စီးကရက်သောက်ခြင်း၊ ကွမ်းစားခြင်း၊ နေလွဲမွန်းတည့်အချိန်တွင် လက်ဖက်ရည်၊ ဒိန်ချဉ်၊ ကော်ဖီ သောက်သုံးခြင်းများ ပြုလုပ်လာကြပါသည်။ တချို့သော ဒကာ ဒကာများသည် မသိလို့ဖြစ်စေ၊ သိလျက်နှင့်ဖြစ်စေ ဆက်ကပ်လေ့ရှိသောအခါ ရဟန်းတော်များအနေနှင့်ဆိုဆုံးမသင့်၊ အကြောင်းပြ ငြင်းဆိုသင့်ပါသော်လည်း အစဉ် လက်ခံလေ့ ရှိနေကြပါသည်။ ရောဂါအခြေအနေတစုံတရာကြောင့် ညစာ သုံးဆောင်ခြင်းသည် ဂီလာနရဟန်းများအတွက် သင့်တော်သော်လည်း၊ မည်သည့်ရောဂါမျှ မရှိပါက ညစာသုံးဆောင်ခြင်းသည် ဝိနည်းအာပတ်သင့်စေပါသည်။
ယနေ့ခေတ်ကာလတွင် တရားနာသူအများစုသည် အခြေခံ ဒါန၊ သီလ အုတ်မြစ်မခိုင်မာသေးဘဲ၊ မနားလည်သေးဘဲ ဓာတ်၊ ပရမတ်၊ ရုပ်နာမ် စသော အဆင့်မြင့်တရားများကို လောဘတကြီး နာယူနေကြပါသည်။ အခြေခံ ကိုယ်ကျင့်သီလခိုင်မြဲမှု မရှိသောကြောင့် နာယူသမျှသော အဆင့်မြင့်တရားများသည် နားတဖက်မှဝင်ပြီး ထိုနားမှပင် ချက်ချင်းပြန်ထွက်လေသောကြောင့် အကုသိုလ်ဟူသမျှ ဝန်လေး တုန့်ဆိုင်းခြင်းမရှိပဲ ပြုလုပ်နေတတ်ကြပါသည်။ နိဗ္ဗာန်သို့ ဦးတည်ချက် ထားသော်လည်း၊ အပယ်ငရဲသို့ ခြေလှမ်းမိနေမှန်း မသိ လှမ်းနေကြပါသည်။ တနည်းအားဖြင့် ခေါင်းပေါင်း ပေါင်းထားသော်လည်း၊ ခါးဝတ်ပုဆိုး မပါသကဲ့သို့ တင့်တယ်မှုမရှိ ဖြစ်နေကြပါသည်။
အသေတတ်ဖို့ သံဝေဂတရားများကို အဆက်မပြတ် နားထောင်နေသော်လည်း၊ အနေတတ်စေသော သီလခိုင်မြဲမှု မရှိလေသောကြောင့် အသေမြတ်ရန် မသေချာလှပေ။ နိဗ္ဗာန်သို့ ရောက်မည် မရောက်မည် မသေချာလှသော်လည်း အပယ်ငရဲသို့ ရောက်ရန် ရာခိုင်နှုန်းအပြည့် သေချာလှပါသည်။ အသေတတ်ခြင်းသည် တဘဝစာသာ ကောင်းစားနိုင်ပြီး၊ အနေတတ်မှသာ သံသရာတလျှောက် ကောင်းစားနိုင်ပါမည်။
ဘုရား၊ တရား၊ သံဃာတည်းဟူသော ရတနာသုံးပါးနှင့် စပ်လျဉ်းပြီး၊ လူအများ လှူဒါန်းသော ဘုရား၊ ကျောင်း၊ ကန်၊ သိမ် ဇရပ် အဆောက်အဦးများ၊ ပစ္စည်းလေးပါးဖြစ်သော ကျောင်း၊ ဆေး၊ ဆွမ်း၊ သင်္ကန်းနှင့်စပ်လျဉ်းသည့် အရာအားလုံးကို သာသနာ့ပစ္စည်းဟု ခေါ်ဆိုပါသည်။
သာသနာ့ပစ္စည်းများကို အလွဲသုံးစားလုပ်ခြင်း၊ မိမိကိုယ်ကျိုးအတွက် အသုံးပြုခြင်း၊ ပြုလုပ်ပါက အပယ်ငရဲသို့ ကျရောက်မည့်ဝဋ်ဒုက္ခကို ခံစားကြရပါမည်။ ငရဲဘဝက လွတ်မြောက်လာပါကလည်း လူပြန်ဖြစ်ရန် ခဲယဉ်းလှပါသည်။ လူဘုံရောက်ပြန်သော်လည်း သာသနာနှင့် ကြုံဆုံရန် ခက်ခဲပါသည်။ သာသနာနှင့် ကြုံပြန်တော့လည်း ကျင့်ကြံနားလည်မှု ကြန့်ကြာနိုင်ပါသည်။ ဘုရားရှင်၏ ဥာဏ်တော်ကို ဖူးမြင်ရန် ခက်ခဲသည့်အပြင် အရိယာသံဃာများကို လှူဒါန်းရန်လည်း မလွယ်ကူနိုင်ချေ။ သာဓကအားဖြင့် ဘုရားရှင်နှင့် ရဟန်းသံဃာတော်များ၏ ဆွမ်းဟင်းများကို ခိုးစားသူများသည် ၉၂ ကမ္ဘာတိတိ အငတ်ငတ် အပြတ်ပြတ်ဖြင့် ပြိတ္တာဘဝသို့ ကျရောက်ခဲ့ပါသည်။
သာသနာပြုအမည်ခံ လူပုဂ္ဂိုလ်များ၏ ရုပ်ဆိုးကျည်းတန်သော လုပ်ရပ်များ..
ယနေ့ခေတ်အခါတွင် သာသနာပြုအမည်ခံ လူပုဂ္ဂိုလ်များသည် သာသနာပြုခြင်းနှင့် မဆီလျော် မအပ်စပ်သော ဆောင်ရွက်ချက်များကို အကြောက်တရားမရှိ ရှက်ရွံ့မှုကင်းစွာ လက်ရဲဇက်ရဲ ပြုလုပ်နေကြပါသည်။ ယင်းသို့သော လုပ်ရပ်များကို သိရှိသော အချို့ရဟန်းတော်များသည် ဆုံးမခြင်း ကန့်ကွက်ခြင်း မရှိသည့်အပြင် မသိမသာတမျိုး သိသိသာသာတမျိုး အရေးတယူ ထောက်ပံ့ခြင်းများ ပြုလုပ်နေကြပါသည်။ ဖြစ်သင့်သည်မှာ ဆိုဆုံးမ၍မရပါက လူ့အသိုင်းအဝိုင်းမှ ဖယ်ထုတ်ခြင်းဖြင့် အရေးယူသင့်ပါသည်။ ထိုသို့မဟုတ် မိမိနှင့်မသက်ဆိုင်သလို သာသနာမျက်နှာမကြည့်ပဲ ထောက်ခံ အားပေးခြင်းသည် သာသနာဖျက်ခြင်းကို သွယ်ဝိုက်သောနည်းဖြင့် ပြုလုပ်နေသည်နှင့် တူလှပါသည်။
လူအများလှူဒါန်းသော သာသနာပိုင် ဘုန်းကြီးကျောင်း၊ အဆောက်အဦးများကို မိမိပိုင် သဘောထားခြင်း၊ သီတင်းသုံးနေထိုင်သော ရဟန်းတော်များအား မိမိသြဇာ တည်မြဲရေးအတွက် မသမာသောနည်းမျိုးစုံဖြင့် လွှမ်းမိုးချုပ်ကိုင်ခြင်း၊ မိမိစိတ်တိုင်းကျ မနေနိုင်သော ရဟန်းတော်များအား ကျောင်းမှ နှင်ထုတ်ခြင်းအပြင်၊ တိုင်းပြည်မှ နှင်ထုတ်နိုင်ရန်ပါ ကြိုးစားလုပ်ကိုင်ခြင်း၊ အကြွေးဖြင့် ဝယ်ယူထားသော ဘုန်းကြီးကျောင်းဖိုး ကြေစေရန် ရဟန်းတော်များထံမှ လစဉ် အလှူငွေ တောင်းခံခြင်းအပြင်၊ ရဟန်းတော်များအား လှူဒါန်းသော အလှူငွေများကိုပါ သိမ်းယူခြင်း စသော အကုသိုလ်အလုပ်များကို မကြောက်မရွံ့ ရဲရဲဝံ့ဝံ့ လုပ်ကိုင်နေကြပါသည်။
ရဟန်းသံဃာတော်များသည် မည်သူနှင့်မျှ မသက်ဆိုင်ပါ..
ရဟန်းတော်များဟူသည် သာသနာ့ကောင်းကျိုးကို သယ်ပိုးနေသောကြောင့် သာသနာနှင့်သာ သက်ဆိုင်ပါသည်။ ရဟန်းခံသော ရဟန်းဒကာ ရဟန်းအမများမဆိုထားနှင့်၊ မွေးမိခင် ကျွေးဖခင်များသည်ပင်လျှင် နံမည်ခံသာ သက်ဆိုင်နိုင်ပါသည်။ သို့ရာတွင် တချို့သော ရဟန်းအမများသည် ရဟန်းအမများ လုပ်ပိုင်ခွင့်ထက် ကျော်လွန်လျက် ရဟန်းတော်များကို ချုပ်ချယ်ခြင်း၊ သူတပါးမှ ဆွမ်းဆက်ကပ်ခြင်းကို ကန့်သတ်တားမြစ်ခြင်း၊ ရဟန်းတော်၏ ဝိနည်းသိက္ခာပုဒ်ကို လေးစားမှုမရှိခြင်း၊ ရဟန်းတော်အတွက် လှူဒါန်းသော ဆွမ်းဟင်းများကို ရဟန်းတော်နှင့် တဝိုင်းတည်း အတူ စားသောက်ခြင်း၊ ရဟန်းတော်များကို ရိုသေမှုမရှိ တန်းတူထား ဆက်ဆံခြင်း စသော သာသနာတော်နှင့် မလျော်ညီစွာ စည်းမဲ့ကမ်းမဲ့ ပြုလုပ်နေကြပါသည်။
ရဟန်းတော်များသည် အသုံးချခံ ဖြစ်နေပြီလော..
အချို့သော သာသနာအသင်းအဖွဲ့အစည်းများသည် မိမိတို့၏ ကျောင်းရံပုံငွေ ရရှိရေးအတွက် ရဟန်းတော်များအား ပင့်ဖိတ်လျက် တရားပွဲများ ပြုလုပ်ကြပါသည်။ သို့ရာတွင် မိမိတို့ပင့်ဖိတ်သော ရဟန်းများအပေါ် သဒ္ဓါတရားမရှိ၊ ဝိနည်းစည်းကမ်းနှင့်အညီ ဆွမ်းဆက်ကပ်ခြင်းမပြုပဲ၊ တာဝန်မဲ့ ပြုမူကြပါသည်။ ထို့ပြင် ရဟန်းတော်များ ဝိနည်းအာပတ် ကင်းလွတ်စေရန် စိတ်စေတနာထက်သန်စွာနှင့် ဆွမ်းဆက်ကပ်သော ဒကာမများကို မဟုတ်တမ်းတရား စွပ်စွဲပြောဆိုခြင်းဖြင့် သာသနာတော် ညစ်နွမ်းစေမည့် အပြောအဆို အပြုအမူများကို စည်းလွတ်ဝါးလွတ် ပြုလုပ်နေကြပါသည်။ မိမိတို့ကိုးကွယ်သော ဆရာတော်ဘုရားကြီး၏ ဂုဏ်သရေကိုမျှ မထောက်ထား၊ ဆရာတော်ဘုရားကြီး ဟောကြားခဲ့သော မည်သည့်တရားတော်ကိုမျှ နှလုံးမသွင်းဘဲ တရားလာရောက် ချီးမြှင့်ဟောကြားပေးသော ဆရာတော်များ၏ မကောင်းသတင်းများလွှင့်ခြင်းဖြင့် သာသနာပြုနေကြပါသည်။ လိမ်မာစေရန် ဆုံးမ လမ်းညွှန်မှု ပြုခဲ့ ဟောကြားပေးခဲ့တော်မူသော ဆရာတော်များ၏ စေတနာ ကျေးဇူးတရားများကို သိတတ်မှုမရှိဘဲ ကျေးဇူးကန်းသော အပြုအမူများဖြင့်သာ တုန့်ပြန်လျက်ရှိနေပါသည်။
ယနေ့ ပြည်ပသာသနာ အခြေအနေ
ဤသို့သော သာသနာပြုအမည်ခံ လူပုဂ္ဂိုလ်များ၏ သာသနာနှင့်မလျော်သော အပြုအမူ အပြောအဆိုများကြောင့် မူလကတည်းက ဘာသာ၊သာသနာကို စိတ်ဝင်စားမှုမရှိ၊ ယုံကြည်မှု မရှိသော ဗုဒ္ဓဘာသာ အမည်ခံသက်သက် လူပုဂ္ဂိုလ်များကို တရားတော်များ နာယူစေရန် စည်းရုံးဆွဲဆောင်မှု မပြုနိုင်တော့ပေ။ ဘုန်းကြီးကျောင်းများသို့ လာကြသော်လည်း၊ ကျွေးမွေးထားသည်များကို စားသောက်ပြီးသည်နှင့် တရား မနာယူတော့ဘဲ အိမ်ပြန်သွားသူများမှာ ၈၀% အထိ တိုးမြှင့်လာခဲ့ပါသည်။ အသက်အရွယ်များ ကြီးမြင့်လာကြသော်လည်း ဘုရားရိပ်၊တရားရိပ်တွင် မမွေ့လျော်ဘဲ အငြိမ့်ပွဲ စတိတ်ရှိုး ပျော်ပွဲရွှင်ပွဲများတွင် အားတက်တရော ဆင်နွှဲနေကြသည်ကို တွေ့မြင်နေရပါသည်။
သာသနာမပြုလျှင်နေပါ၊ သာသနာကို မဖျက်ဆီးကြပါနဲ့….
ရဟန်းတော်များ သာမက လူပုဂ္ဂိုလ်များအနေနှင့် သာသနာမပြုဘဲ နေပါက ကုသိုလ်မရသကဲ့သို့၊ ငရဲလဲ မကျနိုင်ပေ။ သို့ရာတွင် သာသနာ ပြုသလိုလိုနှင့် သာသနာကို ဖျက်ဆီးမိပါက၊ ကုသိုလ်မရသည့်အပြင် အပယ်ငရဲသို့ ကျရောက်နိုင်သည်ကို သတိပြုစေလိုပါသည်။ အထူးအားဖြင့် ရဟန်းတော်များအနေနှင့် ရဟန်းဘဝတွင် ရဟန်းကျင့်ဝတ် ဝိနည်းစည်းကမ်းနှင့်အညီ မနေထိုင်နိုင်ပါက လူထွက်ခြင်းအားဖြင့် သာသနာကို ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်သင့်ပါသည်။
မိမိကိုယ်ကို ကြည်ညိုအောင် နေထိုင်သင့်ပါသည်…
ရဟန်းတော်များအနေနှင့် ဒကာ ဒကာမများ ကြည်ညိုအောင် ကံသုံးပါးစလုံး ထိန်းသိမ်း စောင့်ရှောက်ရမည့်အပြင် မိမိကိုယ်ကို ကြည်ညိုအောင်လဲ အမြဲတမ်း သတိမလွတ်စေဘဲ နေထိုင်သင့်ပါသည်။ မိမိ၏ စိတ်ကို တပါးသူများ အလွယ်တကူ မသိနိုင်သော်လည်း မိမိကိုယ်တိုင် သိနေပါသည်။ မိမိ၏ ရဟန်းဘဝကို မမေ့မလျော့ပဲ လူများကဲ့သို့ နေထိုင်ခြင်းမပြုစေရန် အစဉ် ထိန်းသိမ်းဖို့ လိုအပ်ပါသည်။
မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ မိမိတို့ ပြုသမျှကံ မှန်သမျှသည် ပဲ့တင်သံအနေဖြင့် မိမိထံ ပြန်လာမည်ဆိုခြင်းကို သာသနာပြုသူများအားလုံး နားလည်သင့်ပါသည်။ မကောင်းမှုများ ပြုလုပ်သူခြင်း တူသော်လည်း သာသနာနှင့်စပ်လျဉ်းပြီး မကောင်းမှု ပြုလုပ်သူသည် အပြစ်သင့်ခြင်း ပိုမို ကြီးမားနိုင်သည်ကိုလည်း သဘောပေါက်စေလိုပါသည်။
အမေသတ်တဲ့ကံ၊ အဖေသတ်တဲ့ကံ၊ ရဟန္တာသတ်တဲ့ကံ၊ ဘုရားရှင်ကို သွေးစိမ်းတည်အောင် လုပ်တဲ့ကံ၊ သံဃာသင်းခွဲတဲ့ကံ တည်းဟူသော ပဉ္စာနန္တရိယကံငါးပါးကို မကျူးလွန်သေးသူ မှန်သမျှ သံသရာမှ လွတ်မြောက်ကြောင်း တရားများကို ကျင့်ကြံရန် မနောက်ကျသေးပေ။ မိမိတို့၏ အမှားများကို အချိန်မှီ ပြုပြင်ခြင်းဖြင့် လူ့ပတ်ဝန်းကျင် လူ့အကျိုးပြုလုပ်ငန်းများကို ကြိုးစားအားထုတ်မည်ဆိုပါက လူသာဓုခေါ် နတ်သာဓုခေါ်မည့်အပြင် လောကီ လောကုတ္တရာ မိမိတို့ အလိုရှိရာ လမ်းကြောင်းသို့ ချောမွေ့စွာ လျှောက်လှမ်းနိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။
ယုံကြည်မှုသဒ္ဓါတရားတည်းဟူသော မျိုးစေ့၊ စစ်မှန်သော စေတနာတည်းဟူသောရေသောက်မြစ်၊ မေတ္တာတည်းဟူသော ရေစင်၊ ကောင်းကျိုးလိုလား ဂရုဏာတည်းဟူသော မြေသြဇာ၊ မုဒိတာဟူသော နေရောင်ခြည် စသည်တို့ ဟန်ချက်ညီညီ ပေါင်းစပ်မှသာလျှင် သာသနာတည်းဟူသော အကိုင်းအလက်များနှင့် ပြီးပြည့်စုံသော ကောင်းကျိုးသစ်ပင်ကို ရရှိမည်ဖြစ်ပါသည်။
Posted by ထက်စုနှင်းဆီ at 10:02 AM5comments
Posted by ထက်စုနှင်းဆီ at 8:35 PM4comments
လိုတိုး ပိုလျှော့ ညှိနိုင်မှသာ..
Posted by ထက်စုနှင်းဆီ at 9:49 PM 1 comments
Posted by ထက်စုနှင်းဆီ at 1:08 PM0comments
Posted by ထက်စုနှင်းဆီ at 9:31 PM 1 comments
Posted by ထက်စုနှင်းဆီ at 7:38 PM0comments
သာသနာစစ် သာသနာမှန်ဟူသည် မြတ်စွာဘုရား၏ အဆုံးအမများကို တသွေမတိမ်း လိုက်နာသူများ၏ လက်ဝယ်တွင်း၌သာ ထာဝရ တည်မြဲနိုင်မည်။
သာသနာကို ဗန်းပြပြီး မိမိကိုယ်ကျိုးစီးပွားအတွက် လုပ်ဆောင်နေသူများ၊ တရားစစ်တရားမှန်ကို သေသေချာချာ သဘောပေါက်နားလည်မှုမရှိပဲ ထင်ရာစိုင်းနေသူများ၊ ကိုးကွယ်မှု အရောရောအထွေးထွေးနဲ့ အီယောင်ဝါး ယုံကြည်နေကြသူများ၊ များပြားလာသည်နှင့်အမျှ သာသနာကွယ်ပျောက်ရန် အန္တရာယ်မှာ တနေ့တခြား ကြီးမားလာပါတယ်။ ဗုဒ္ဓသာသနာကို ဖျက်ဆီးမည့်သူများမှာ လူမျိုးခြား၊ ဘာသာခြားများ မဟုတ်ပါ။ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်အမည်ခံ အယောင်ဆောင်ထားသူများသာ အနီးကပ် ပူးသတ်ဖျက်ဆီးကြမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဝေဖန်ထောက်ပြမှု နဲ့ ပုတ်ခတ်စွပ်စွဲမှု
ဝေဖန်ထောက်ပြမှုနဲ့ ပုတ်ခတ်စွပ်စွဲမှု ဆိုသည်မှာ များစွာ ခြားနားလှပါတယ်။ ဝေဖန်ထောက်ပြမှုတွင် ပြုပြင်ပြောင်းလဲစေလိုသော စေတနာကောင်းများစွာ ပါဝင်နေပြီး၊ ပုတ်ခတ်စွပ်စွဲမှုတွင်မူ လူတစ်ယောက်၏ ဘဝကို နစ်မွန်းဆုတ်ယုတ် သွားစေလိုသော စေတနာဆိုးများစွာ ပါဝင်နေပါတယ်။ ဝေဖန်ထောက်ပြမှုသည် မှန်ကန်သော အချက်အလက်ပေါ်မူတည်နေပြီး၊ ပုတ်ခတ်စွပ်စွဲမှုသည် မှားယွင်းမှုအပေါ် မူတည်လေ့ရှိပါတယ်။
ဝေဖန်ထောက်ပြ ပြောဆိုမှုကြောင့် တဖက်သားက အရှက်ကြီးစွာနဲ့ ပြုပြင်ပြောင်းလဲလိုက်မည်ဆိုပါက ဝေဖန်သူသာမက ဝေဖန်ခံရသူအတွက်ပါ အကျိုးကျေးဇူးများစွာ ရရှိစေပါတယ်။ ဝေဖန်ခံရသူအနေဖြင့် ဝေဖန်သူ၏ ထောက်ပြမှု မှန်ကန်နေပါက ပြုပြင်ပြောင်းလဲလိုက်ဖို့ ဝန်မလေးမှသာလျှင် မိမိကိုယ်မိမိ သူတော်ကောင်းအဖြစ် ပြသပြီးသား ဖြစ်သွားမှာပါ။ ထိုသို့မဟုတ်ပဲ ဝေဖန်သူကို ရန်လုပ်ခြင်း၊ အရွဲ့တိုက်ပြီး အမှားများ ဆက်လုပ်နေပါက၊ မည်သူမပြု မိမိမှု ဆိုသကဲ့သို့ လက်ရှိဘဝတွင်သာမက သံသရာတလျှောက်မှာပါ မိမိပြုသော အမှားကံ၏ ဆိုးကျိုးကို ခံစားရမည်မှာ ဧကန်မုချပင် ဖြစ်ပေလိမ့်မည်။
လူတိုင်း လူတိုင်းသည် အနည်းနဲ့အများဆိုသလို အမှားများစွာ လုပ်ဖူး ကြုံဖူးကြပါတယ်။ လူ့ဘောင်လောကတွင် အမှားများနဲ့ကင်းသူ၊ ပြည့်စုံမှန်ကန်လွန်းသူ ရှားပါးလှပါတယ်။ ဤနေရာတွင် လူအမျိုးအစား ၄ မျိုးကို ထင်ထင်ရှားရှားတွေ့မြင်နိုင်ပါတယ်။
၁)အမှားကို အမှားမှန်းမသိမြင်သူ (ဥာဏ်ရည်နိမ့်ပါးပြီး၊ အသိဥာဏ်အမှောင် ဖုံးလွှမ်းမှု အားကြီးသူ)
၂)အမှားကို အမှားမှန်းသိသော်လည်း၊ အမှန်ကိုမလိုက်နာချင်သူ (ဥာဏ်ရည် အနည်းငယ်မြင့်မားသော်လည်း၊ အသိဥာဏ်အမှောင် ဖုံးလွှမ်းနေသေးသူ)
၃)အမှားကို အမှားမှန်းသိမြင်ပြီး၊ အမှန်ပြင်ဆင်ရန် ဝန်မလေးသူ (ဥာဏ်ရည်မြင့်မားပြီး၊ အသိဥာဏ်အလင်းရှိသူ)
၄)အမှားကို အမှားမှန်း သိလျှင်သိခြင်းး၊ အမှန်ပြင်ဆင်ရုံမက ဝန်ချတောင်းပန်ရန် ရည်သန်သူ (ဥာဏ်ရည်မြင့်မား၊ အသိဥာဏ်အလင်းရှိရုံမက မာနအလျဉ်းမရှိသူ)
အထက်ပါ လူအမျိုးအစား ၄မျိုးအနက် နောက်ဆုံးအမျိုးအစားသာလျှင် သူတော်ကောင်းအဖြစ် သတ်မှတ်နိုင်ပါတယ်။
သာသနာပြုရာတွင် မိမိကိုယ်ကို သာသနာပြုခြင်းနဲ့ အများသူငါကို သာသနာပြုခြင်းဟု နှစ်မျိုးနှစ်စားရှိပါတယ်။
မိမိကိုယ်မိမိ သာသနာပြုနေသူအနေနဲ့ ကိုယ့်အလုပ်ကိုယ်လုပ်၊ ကိုယ့်တရားနဲ့ ကိုယ်နေပြီး မိမိတစ်ကိုယ်တည်းစား ကောင်းစားဖို့ ဘေးပတ်ဝန်းကျင်ကို မကြည့်ပဲ နေနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အများသူငါကို သာသနာပြုနေကြသူများအနေနဲ့ မိမိအရေးသာမက မိမိပတ်ဝန်းကျင်ရှိ လူအများအတွက် အကျိုးယုတ်စေမည့်၊ အယူမှားစေမည့် အရေးကိစ္စများ ပေါ်ပေါက်လာပါက မည်သူမျက်နှာမျှ မထောက်ထား မညှာတာပဲ သာသနာမျက်နှာတခုတည်းကိုပဲ ကြည့်လျက် ဝေဖန်ထောက်ပြသင့်ပါတယ်။
အထူးသဖြင့် ရဟန်းသံဃာတော်များအနေနဲ့ မိမိကိုယ်ကို သာသနာပြုတဲ့ အဆင့်ကို ကျော်လွန်လျက် အများအတွက် သာသနာပြုနေသူများ ဖြစ်ပါသောကြောင့် မိမိမြင်တွေ့ကြားသိနေရသော အမြင်အကြားမတော်လျော်သော အရေးကိစ္စများကို မည်သူ့ကိုမျှ မထောက်ထားမညှာတာပဲ ရဲရဲဝံ့ဝံ့ ဝေဖန်ထောက်ပြသင့်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် မိမိတို့၏ တပည့်သား ရဟန်းတော်များ၏ ဝိနည်းစည်းကမ်းဖောက်ဖျက်မှုများ၊ လူမှုဆက်ဆံရေးနယ်ပယ် ကျော်လွန်မှုများ၊ ကာယကံ ဝစီကံ မနောကံဖြင့် ဖောက်ပြားကျူးလွန်နေမှုများ၊ မတရားမှုများကို ဆုံးမ အပြစ်ပေး အရေးယူသင့်ပါတယ်။ ရေငုံနှုတ်ပိတ် မိမိနဲ့ မသက်ဆိုင်သလိုနေခြင်း၊ အမုန်းခံရမည်ကိုစိုးရိမ်နေခြင်း၊ အကြောက်တရားနဲ့ မပြောရဲမဆိုရဲခြင်း သည် သာသနာပြုရာမရောက်ပဲ၊ သာသနာဖျက်နေသည်ကို သွယ်ဝိုက်သောနည်းဖြင့် အားပေးရာ ရောက်နေပါတယ်။ သာသနာ့တာဝန်မကျေပြွန်ပဲ သာသနာ့အာဇာနည် မပီသရာ၊ သံဃာ့ဂုဏ်ကို မစောင့်ထိန်းရာ အဖြစ်သို့ ရောက်မှန်းမသိ ရောက်နေပါတယ်။ ထို့အတူ တချိန်တည်းမှာပင် မင်းကျင့်တရားနဲ့ အညီ မအုပ်ချုပ်သော၊ သာသနာပျက်စီးရာပျက်စီးကြောင်း ကြံစည်လုပ်ကိုင်နေသော အစိုးရမင်းနှင့်တကွ၊သာသနာကို အရောင်ဆိုးချင်နေသော လူတစ်ဦးချင်းစီသာမက၊ လူ့အဖွဲ့အစည်း လူ့အသိုင်းအဝိုင်းများ၏ ကမောက်ကမ အခြေအနေများကိုပါ ဝေဖန်ထောက်ပြ ဆုံးမသင့်ပါတယ်။
အဓိက သာသနာဖျက်နေသူများမှာ - မြတ်စွာဘုရား၏ အဆုံးအမသာသနာကို လက်တလုံးကြား မျက်ကွယ်ပြုလျက်ရှိသော၊ သာသနာပြုအမည်ခံ အစိုးရမင်း၊ လူ့အဖွဲ့အစည်းများနှင့် အချို့သော ရဟန်းတော်များ ဖြစ်ပါတယ်။
သာသနာဖျက်နေသော အစိုးရမင်းနဲ့ နောက်လိုက်နောက်ပါများ
နိုင်ငံအတွင်း တရားပွဲများ ဆိတ်သုဉ်းပြီ ဆိုပါက သာသနာကွယ်ပျောက်ခြင်း၏ အစပင်ဖြစ်သည်။ ရဟန်းသံဃာတော်များအား ဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်ခြင်း၊ တရားပွဲများအား အကန့်အသတ်ဖြင့်ခွင့်ပြုခြင်း၊ မြတ်စွာဘုရား၏ အဆုံးအမ သာသနာများကို လွတ်လပ်မှန်ကန်စွာ ဟောပြောခွင့် မရခြင်းများသည် သာသနာကွယ်ပျောက် စေနိုင်သည့် အကြောင်းအချက်များဖြစ်သည်။ ထို့ပြင် မိမ်ိတို့၏ အာဏာတည်တံ့ ခိုင်မြဲရေးအတွက် ဘုရား၊စေတီ၊ပုထိုးများကို အသုံးချလျက်၊ မကြံစည်သင့် မကြံစည်ကောင်းသော ဗေဒင်၊ ယတြာ၊ လက်ဖွဲ့၊ အင်းအိုင် စသည့် အောက်လမ်းနည်းမျိုးစုံဖြင့် အသိဥာဏ်နိမ့်ပါးစွာ ပြုလုပ်နေခြင်းဖြင့်လည်း မြင့်မြတ်လှသော သာသနာကို ဖျက်ဆီးလျက်ရှိကြပါတယ်။ အယူမှား၊ ကိုးကွယ်မှုမှား၊ လုပ်ရပ်မှားများဖြင့် ဗုဒ္ဓသာသနာကို စံနစ်တကျ ဖျက်ဆီးနေကြပါတယ်။ အမှားများထောက်ပြ အမှန်ပြလျက် ဆုံးမပေးသော ရဟန်းသံဃာတော်များကို မထီမဲ့မြင်ပြုလျက် တရားပွဲများ ပိတ်ပင်ခြင်း၊ လက်မှတ်ထိုး၊ ဝန်ခံချက်ထိုးခိုင်းခြင်းဖြင့်လည်း မြတ်စွာဘုရား၏ သာသနာကို စော်ကားမော်ကားပြုလျက်ရှိပါတယ်။
သာသနာဖျက်နေသော သာသနာပြုအမည်ခံ လူပုဂ္ဂိုလ်များနှင့် လူ့အဖွဲ့အစည်းများ
မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်တော်က ဂိုဏ်းဂဏ၊ အသင်းအဖွဲ့အစည်းရယ်လို့ မရှိခဲ့ပါဘူး။ ထေကြီးဝါကြီး ဝါစဉ်အလိုက် အဆင့်ဆင့် အရိုအသေပေး၊ ရဟန်းတစ်ပါးနှင့်တစ်ပါး စည်းလုံးညီညွတ်ခဲ့ပါတယ်။ ဘွဲ့တံဆိပ်အလိုက်၊ ရာထူးအလိုက်၊ နေရာပေးခြင်းမျိုးမဟုတ်ပဲ၊ ရဟန်းဝါစဉ်အလိုက် ဝိနည်းစည်းကမ်းနဲ့အညီ နေရာပေးခဲ့ကြပါတယ်။
ယနေ့အချိန်အခါမှာတော့ ရဟန်းသံဃာတော်များကို ဘွဲ့တံဆိပ်တော်များ၊ အသင်းအဖွဲ့အစည်း ရာထူးအဆောင်အယောင်များ အပ်နှင်းခြင်းဖြင့် တစ်ပါးနှင့်တစ်ပါး အပြိုင်အဆိုင်ဖြစ်လာစေပါတယ်။ စစ်မှန်သော အရည်အချင်းဖြင့် အပ်နှင်းသော ဘွဲ့တံဆိပ်တော်များမဟုတ်ပဲ၊ လာပ်ပေးလာပ်ယူနည်းဖြင့် အပ်နှင်းသော ဘွဲ့တံဆိပ်တော်ဖြစ်ခြင်းကြောင့်၊ မြတ်စွာဘုရား၏ အဆုံးအမ စာပေများကို လေ့လာအားထုတ်မှုများ အားနည်းလာစေခဲ့ပါတယ်။ ထို့ပြင် မိုးကုတ်၊ မဟာစည်၊ စွန်းလွန်း စသည့် အသင်းအဖွဲ့များ၏ ပြိုင်ဆိုင်မှုများကြောင့်လည်း သံဃာတော်များကို ဂိုဏ်းခွဲသင်းခွဲနေသကဲ့သို့ စည်းလုံးညီညွတ်မှု ပျက်ပြားစေပြီး အားပြိုင်မှုများ ဖြစ်စေပါတယ်။ ပျံလွန်လေပြီးသော ဆရာတော်ကြီးများအနေဖြင့် ယခုကဲ့သို့ ဂိုဏ်းဂဏများ ပေါ်ပေါက်ခြင်းကို နှစ်သက်တော်မူကြမည်မဟုတ်ပေ။
တရားတော်များအားလုံးမှာ မြတ်စွာဘုရားဟောကြားခဲ့သော တရားတော်များသာဖြစ်သော်လည်း အာစရိယဝါဒ ဦးစားပေးမှုကြောင့် မိုးကုတ်တရား၊ မဟာစည်တရား၊ စွန်းလွန်းတရား စသည် စသည်ဖြင့် ဝိဝါဒ ကွဲပြားမှုများ ဖြစ်နေစေပါတယ်။ သာသနာ၏ ရေသောက်မြစ်သဖွယ်ဖြစ်နေသော စာသင်တိုက်များမှ ရဟန်းသံဃာတော် သာမဏေလေးများ၊ ဦးဇင်းများအတွက် ဆွမ်းကွမ်းအထောက်အပံ့များ၊ စာအုပ်စာတမ်း စာရေးကိရိယာများ လှူဒါန်းကြမည့်အစား တရားရိပ်သာအသီးသီးတွင် တရားဝိဝါဒ၊ ဂိုဏ်းစွဲ ဂဏစွဲဝိဝါဒများနှင့် လုံးလည်ချာလည်လိုက်နေသော အိုးခြမ်းပဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်များကိုသာ အပြိုင်အဆိုင်လှူဒါန်းနေခြင်းဖြင့် မယောင်ရာဆီလူးနေကြပါတယ်။
တရားစစ် တရားမှန်ထွန်းကားရာ နိုင်ငံတွင် ၃၇နတ်မင်းများ ပျော်မြူးရာ တောင်ပြုန်းပွဲတော်ကြီးကို နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း ခြိမ့်ခြိမ့်သည်းသည်း ကျင်းပခြင်း၊ ငွေသန်းပေါင်းများစွာအကုန်ကျခံပြီး နတ်သဘင်ပွဲ ဆင်နွှဲခြင်း၊ ဗေဒင် ယတြာ အောက်လမ်းနည်းများကို ယုံယုံကြည်ကြည်ဖြင့် ပြုလုပ်နေကြခြင်း၊ ကံ-ကံ၏အကျိုးကို မယုံကြည်ပဲ အလွယ်လိုက် အချောင်နည်းဖြင့် ချဲထီ နှစ်လုံးထီများကို စည်းစိမ်ပြုတ်ထိုးနေကြခြင်း၊ ကောင်းရာကောင်းဝယ် လုပ်ကိုင်ခြင်းမပြုကြတော့ပဲ အူမတောင့်မှ သီလ စောင့်နိုင်မယ်ဆိုတဲ့ စိတ်ဓာတ်များဖြင့် သီလမလုံခြုံ၊ ကံသုံးပါးကို မထိန်းသိမ်းတော့ပဲ ထင်ရာစိုင်းခြင်းဖြင့် သာသနာပျက်စီးရာပျက်စီးကြောင်းသို့ ဦးတည်လျက်ရှိနေပါတယ်။
အလှူအတန်းပေးကြရာတွင်လည်း အမှန်တကယ်လိုအပ်နေသော ရဟန်းသံဃာများနှင့် လူများကို ပေးလှူခြင်းထက် မိမိတို့အကျိုးစီးပွားကို ဖြစ်ထွန်းစေမည့်၊ အာဏာ တည်မြဲရေးကို ဖြစ်စေမည့် ဘုရားတည် ကျောင်းဆောက် ထီးတင်ခြင်းဖြင့် ရွှေကျောင်းပြောင်ပြောင် ဝမ်းခေါင်ခေါင်အဖြစ်သို့ ရောက်မှန်းမသိ ရောက်နေကြပါတယ်။ လက်တဖက်က လှူဒါန်းနေပြီး၊ ကျန်လက်တဖက်က ပြန်ခိုးယူခြင်းသည် ကုသိုလ်တစ်ပဲ အကုသိုလ်တစ်ပိဿာ ဖြစ်နေသောအလှူ ဖြစ်နေပါလိမ့်မည်။ အမှန်တကယ် မြတ်စွာဘုရား၏ အဆုံးအမသာသနာကို ရင်ဝယ်ကိန်းသူဖြစ်မည်ဆိုပါက မြတ်စွာဘုရား၏ လမ်းစဉ်ကို ကျင့်သုံးကြမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အဓိက နဲ့ သာမညကို ခွဲခြားနိုင်ပြီး မည်သည်ကို ဦးစားပေးဆောင်ရွက်ရမည်ဆိုတာကို သဘောပေါက်နားလည်သင့်ပါတယ်။
ယနေ့ခေတ် အချိန်အခါကာလသည် ဝိမုတ္တိသာသနာထွန်းကားနေသော အချိန်ကာလ ဖြစ်သည်နှင့်အညီ ဝိနည်းစည်းကမ်းကို အသက်ထက်တန်ဖိုးထား လိုက်နာစောင့်ရှောက်သော ရဟန်းစစ်၊ ရဟန်းမှန်များစွာ ရှိသကဲ့သို့ အယောင်ဆောင် ရဟန်းတု၊ များစွာလည်း ရောနှောပူးကပ် နေသောကာလလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ စီးပွားရေးအရသော်၎င်း၊ နိုင်ငံရေးအရသော်၎င်း၊ လူမှုရေးအရသော်၎င်း အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် ရဟန်းဝတ်နေသော ရဟန်းယောင်များစွာလဲ ရှိနေကြပါတယ်။ သို့ ဖြစ်ပါသောကြောင့် မိမိတို့ပတ်ဝန်းကျင်တွင် မြတ်စွာဘုရား၏ ဝိနည်းစည်းကမ်းသာသနာကို မလိုက်နာသော ရဟန်းများ ရှိနေပါက အားနာမှု လိုက်လျောမှု မရှိပဲ လူထွက်စေသည်အထိ ဝိုင်းဝန်းကြိုးပမ်းခြင်းဖြင့် သာသနာ့ဂုဏ်ရှိန်ကို မြှင့်တင်ကြစေလိုပါတယ်။
မြတ်စွာဘုရားချမှတ်ခဲ့သော ဝိနည်းစည်းကမ်းများတွင် ရဟန်းသံဃာတော်များအတွက် အရေးကြီးဆုံးမှာ မာတုကာမများနှင့် ရင်းရင်းနှီးနှီးမနေဖို့ပင်ဖြစ်ပါတယ်။ မာတုကာမဆိုရာတွင် မွေးကင်းစ မိန်းကလေးများမှအစ အသက်အရွယ်ကြီးရင့်သော အဘွားအိုများအထိ ပါဝင်ပါတယ်။ မာတုကာမများနဲ့ ဆက်ဆံရာတွင် ကာယကံ ဝစီကံ မနောကံ ကံသုံးပါးလုံးနဲ့ ကင်းကင်းရှင်းရှင်းနေဖို့ပင်ဖြစ်ပါတယ်။ မာတုကာမများနဲ့ အသားချင်းထိစပ်ရန် မဆိုထားနှင့် ၄င်းတို့၏ အသုံးအဆောင်များ ကိုပင် မထိတွေ့ရဟု ဝိနည်းစည်းကမ်းသတ်မှတ်ထားပါတယ်။ ဝိနည်းစည်းကမ်းမလိုက်နာသဖြင့် အာပတ်ထိပါက၊ အာပတ်ဖြေနိုင်ပါတယ်လို့ တချို့ ရဟန်းတော်များ စောဒကတက်နိုင်သော်လည်း၊ ခဏခဏဖြေရသော အာပတ်သည် ရဟန်းတော်များ၏ သမာဓိကို ထိခိုက်ပျက်ပြားစေနိုင်ပါတယ်။
ဂီိလာနရဟန်းအား မာတုကာမများ ပြုစုသင့်ပါသလား….
မြတ်စွာဘုရား၏ ဝိနည်းစည်းကမ်းကို အမှန်တကယ် လိုက်နာလေးစားသော ရဟန်းသံဃာများအနေနဲ့ မာတုကာမများ၏ ထိစပ်ပြုစုမှုကို မခံယူသင့်ပါဘူး။ ဂီိလာနရဟန်းအနေဖြင့် ရောဂါအခြေအနေအရပ်ရပ်ကြောင့် အမှန်အကန် မဆုံးဖြတ်နိုင်ပါကလည်း၊ မာတုကာမများအနေနဲ့ မြတ်စွာဘုရား၏ အဆုံးအမသာသနာကို တကယ်ကြည်ညို လေးစားမည်ဆိုပါက ရဟန်းများ အာပတ်ထိ အပြစ်ရစေမယ့် ကိစ္စများကို ရှောင်ရှားသင့်ပါတယ်။ အကယ်၍ ပြုစုနိုင်သည့် ရဟန်းသာမဏေငယ်များ၊ အမျိုးသားဒကာများ လုံးဝမရှိသဖြင့်၊ မဖြစ်မနေလိုအပ်မည်ဆိုပါက ပြုစုနိုင်သော်လည်း၊ သို့တည်းမဟုတ်ပါက မလုပ်သင့်မလုပ်အပ်သော လုပ်ရပ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။
ခေတ်နဲ့ အညီ ဆက်သွယ်ရေးလွယ်ကူစေရန်၊ တရားဓမ္မများဖြန့်ဖြူးရန်၊ ကမ္ဘာ့သတင်း မြန်မာ့သတင်းများသိရှိစေရန်၊ အချို့သော ရဟန်းတော်များ ကွန်ပြူတာသုံးစွဲခြင်းသည် သင့်လျော်သော်လည်း၊ ခေတ်မှီခြင်းကို လွန်မြောက်လျက် မကြည့်သင့်မကြည့်အပ်သော အချို့ဝက်ဆိုဒ်များကို ကြည့်ရှုခြင်း၊ ဗီဒီယိုများကြည့်ရှူခြင်း၊ သီချင်းနားထောင်ခြင်း စသည်ဖြင့် ခေတ်ရှေ့ပြေးလာကြခြင်းသည် ကောင်းကျိုးကိုကျော်ပြီး ဆိုးကျိုးကို ရောက်စေပါတယ်။ စည်းကမ်းဟူသည် စည်းကမ်းရှိသူအတွက် မလိုအပ်သော်လည်း၊ စည်းကမ်းမရှိသူများအတွက် မရှိမဖြစ် ထားရမယ့်အရာဖြစ်ပါတယ်။ အင်တာနက်၏ ဆိုးကျိုးကြောင့် သမာဓိခိုင်မြဲမှုမရှိသော အချို့ရဟန်းများ လူထွက်ပြီး အိမ်ရာထူထောင်ခဲ့သော သာဓကများ ရှိခဲ့ပါတယ်။ မလိုအပ်ပဲ ကွန်ပြူတာ အသုံးပြုခြင်းသည် ကောင်းကျိုးထက် ဆိုးကျိုးကို ဖြစ်စေသည့်အပြင် ရဟန်းတော်များ၏ ဝိနည်းစည်းကမ်းနှင့်လည်း သင့်တော်မှု မရှိပါဘူး။
အမှန်တရားဟူသည် သူတော်ကောင်းများအတွက် ပျားရည်ကဲ့သို့ ချိုမြိန်လှသော်လည်း၊ အသိဥာဏ်နိမ့်ပါး မိုက်မဲသူများအတွက်မူ ဆေးခါးကြီးမျိုချရသကဲ့သို့ ခါးသီး ခံရခက်လှပါတယ်။ စဉ်းစားဥာဏ်ရှိပြီး အမှန်တရားကို သိမြင်နိုင်သူဆိုပါက အမှားကို ပြုပြင်ရန်ဝန်လေးကြမည်မဟုတ်ပေ။
မြတ်စွာဘုရား၏ သာသနာ ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲရေးအတွက် သာသနာ့ရေသောက်မြစ်များဖြစ်သော ရဟန်းသံဃာ စာသင်သားများအား ထောက်ပံ့လှူဒါန်း မြေတောင်မြှောက်ပေးခြင်း၊ စာသင်တိုက်များ၏ ဆွမ်းကွမ်းချို့တဲ့မှုများအား ဖြေရှင်းပေးခြင်း၊ သာသနာနှင့်မလျော်ညီသော၊ သာသနာပျက်စီးမှုကို ဖြစ်စေသော၊ အရေးမှန်သမျှကို အရှိကို အရှိအတိုင်း အမှန်ကိုအမှန်အတိုင်း မကြောက်မရွံ့ ဟောပြောပြသ ဆုံးမရန် တာဝန်မှာ မြတ်စွာဘုရား၏ တပည့်သား သံဃာတော်အားလုံး၏ အရေးကြီးသော တာဝန်ဖြစ်ပါတယ်။ ဤတာဝန်ကို ကျေကျေပြွန်ပြွန် ဦးလည်မတုံ ထမ်းရွက် နိုင်သူကိုသာလျှင် သာသနာပြုနေသော သာသနာ့အာဇာနည်ဟု သတ်မှတ်နိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။
( ဤဆောင်းပါးဖြင့် ဆရာတော် အရှင်သုမင်္ဂလ အား ဂုဏ်ပြု ပူဇော်ကန်တော့အပ်ပါသည်။)
Posted by ထက်စုနှင်းဆီ at 10:00 AM2comments